Bota a Ɔsom Bo Mapã yɛ ndzɛmba etsitsir bi a woeyiyi efi Jesus Christ N’Asɔr a ɔwɔ hɔ ma Nda a Odzi Ekyir Ahotseweefo a ɔfa ne gyedzi na ne nkyerɛkyerɛ tsitsir pii mu. Dɛm ndzɛmba yinom no Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith, na ɔkyerɛɛ ase na ɔkyerɛwee na wotsintsimii no mu dodowara wɔ Asɔr no ne dawurbɔ nkrataa a ofi ber to ber wɔdze puee guado, wɔ n’aber do no mu.
Nyankopɔn bɔ ɔsorsor no na asaase—Ndzɛmba nyinara a nkwa wɔ mu no wɔbɔe—Nyankopɔn yɛ nyimpa na ɔma no tum wɔ ndzɛmba nkaa nyinara do.
Nyankopɔn bɔɔ ndzɛmba nyinara sunsum mu ansaana wɔreda no su no edzi wɔ asaase do—Ɔbɔɔ ɔbanyin, honam a odzi kan, wɔ asaase do—Ɔbaa yɛ ɔhokãfo ma banyin.
Mbrɛ osii ma Satan bɛyɛɛ abɔnsam—Ɔsɔ Eve hwɛ—Adam na Eve hwe ase, na owu ba wiadze.
Adam na Eve wo mba—Adam bɔ afɔr na ɔsom Nyankopɔn—Wɔwo Cain na Abel—Cain tsew etua, ɔdɔ Satan kyɛn Nyankopɔn, na ɔbɛyɛ Ɔsɛɛba—Ewudzi na emumuyɛdze tserɛw—Wɔkã asɛmpa fi ahyɛse.
Adam n’asefo sie nkaa nwoma—N’asefo atseneneefo no kãa nnuho nsɛm—Nyankopɔn yi Noho kyerɛ Enoch—Enoch kã asɛmpa no—Wɔda nkwagye ho nhyehyɛɛ no edzi kyerɛ Adam—Ne nsa kã ennuma nye asɔfodzi no.
Enoch kyerɛkyerɛ, odzi nkorɔfo no hɔn kan, na otutu mbepɔw—Ɔkyekyer Zion kuropɔn no—Enoch dzi kan hu Nyimpa Ba no Ne mbae, No werdambɔ afɔrbɔ, nye Ahotseweefo hɔn wusoɛr—Odzi kan hu Nsanananmu Ber no, Mboaboano no, Mbae a Otsĩa Ebien no, nye Zion a ɔbɛsan aba no.
Methuselah hyɛ nkɔm—Noah na ne mbabanyin kã asɛmpa no—Emumuyɛdze kɛse petse—Woemmbu nnuho frɛ no hwee—Nyankopɔn hyɛ ɔmom dɛ Nsuyirii bɛsɛɛ honam nyinara.
Abraham hwehwɛ nhyira a ɔfa patriarch nhyehyɛɛ ho—Asɔfo atorfo tseetsee no wɔ Chaldea—Jehovah gyee no nkwa—Ɔkã Egypt n’ahyɛse na amanbu ho nsɛm.
Abraham fi Ur dɛ ɔrokɔ Canaan—Jehovah yi noho kyerɛ no wɔ Haran—Asɛmpa no mu nhyira nyinara no wɔdze bɔɔ n’asefo anohoba na ɔnam n’asefo do dze ama obiara—Ɔkɔ Canaan na ɔtoa do kɔ Egypt.
Abraham nam Urim na Thummim do sũa ewia, bosoom, na nworaba ho nsɛm—Ewuradze da esunsum hɔn onnyiewiei su edzi kyerɛ no—Osũa ndzɛmba a ɔfa ansaana nyimpa rebɛba asaase do ho nsɛm, nyimpa ne dwuma soronko a ɔbɛba ebedzi wɔ asaase do ansaana wɔbɔwo no, Abɔdze, Ɔpomfo ne nsanmu nyii no, na nyimpa asetsena a otsĩa ebien no.
Enyame no hyehyɛ asaase no mbɔe nye ndzɛmba a nkwa wɔ hɔn mu a wɔwɔ do nyinara—Hɔn nhyehyɛɛ wɔ nda esia a wɔdze bɔbɔ wiadze no wɔdze to gua.
Enyame no wie Hɔn abɔdze ho nhyehyɛɛ ndzɛmba nyinara—Wowie Abɔdze no dɛ mbrɛ Hɔn nhyehyɛɛ no tse—Adam to abowadoma biara a nkwa wɔ no mu no dzin.
Gyedzi ho Nsɛmpɔw 1
Yɛgye Nyankopɔn, Onnyiewiei Egya no, na Ne Ba, Jesus Christ, na Sunsum Krɔnkrɔn no dzi.